Qaar ka tirsan maleeshiyada laga keenay Puntland ee ku sugan Jowhar oo sheegay in ay doonayaan in hub kadhigista ka billaabi doonaan suuqa Bakaaraha, Guddoomiyihii maxaakiimta ee gobolka Hiiraan oo ay beeshiisa sheegtay inuu la shaqeyn doono dowladda federaalka ah balse mas'uuliyiinta beelaha kale ee ka tirsanaa ay yihiin dambiileyaal iyo Hoggaamiye kooxeedyo ay ka mid yihiin Muuse Suudi oo Soomaaliya ku soo laabtay. Ruunkinet 06/01/07
Maleeshiyaad laga keenay gobollada Puntland oo shalay soo gaaray magaalada Jowhar ayaa la sheegay in ay ku soo jeedaan magaalada Muqdisho.
Maleeshiyaadkan oo aad u hubeysan kana kooban taageerayaasha madaxweynaha ayaa wararka ka immaanaya magaalada Jowhar sheegayaan in qaarkood ay sugi la'yihiin in Xamar laga billaabo hub uruurin gaar ahaa koonfurta magaalada Muqdisho.
Sidoo kale, maleeshiyadan oo loo sheegay in Suuqa Bakaaraha ee ugu weyn magaalada Muqdisho ay hanti badan taal ayaa warar ku dhow dhow maleeshiyadaasi ku waramayaan in ay ku kaftamayaan jufo hebel ayaa iska leh hantida taal Suuqaasi iyo warar kale.
Dhanka kale, warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in hoggaamiyeyaal kale ay dalka soo galeen.
Xildhibaan Muuse Suudi Yalaxow iyo qaar kale oo ka tirsanaa hoggaamiyeyaashii maxaakiimta ka adkaadeen ayaa la sheegay inay ku soo laabteen Soomaaliya ayagoo ka maqnaa in muddo ah dalka.
Dhinaca kale, guddoomiyihii hore ee maxaakiimta ugu qaabilsanaa gobolka Hiiraan ayaa la sheegay in maanta looga yeeray saldhig ku yaal bariga Beleweyne.
Sheekh Faarax ayaa la taageerayaashiisa u sheegeen taliyaha ciidamada booliska ee magaalada Beledweyne in uu la shaqeynayo maamulka cusub ee magaalada Beledweyne u magacaabay Col. Cabdullahi Yuusuf asagoo gurigiisa la geeyay.
Sidoo kale, maamulka cusub ee magaalada Beledweyne ayaa ku tilmaamay cidkasta oo ka tirsaneyn maxaakiinta kana soo jeeda beelaha degan galbeedka Hiiraan in ay la shaqeeyaan Alqacidda lana qaban doono ayadoo durba ay billaabeen in ay qabsadaan gaari uu wadan jiray mid ka mid ah mas'uuliyiinta maxaakiimta ee galbeedka gobolka Hiiraan.